केही दिन वर्षाको क्रम बढ्ने : बाढीरपहिरोको सम्भावना – Sulsule
केही दिन वर्षाको क्रम बढ्ने : बाढीरपहिरोको सम्भावना
सुलसुले २०७७ भदौ २३ गते १५:१४ मा प्रकाशित
उनका अनुसार प्रदेश नं. १ देखि प्रदेश नं. ५ सम्म नै मौसम बदली भहेको छ । हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा औसतभन्दा केही माथि नेपाल नजिक (उत्तरतर्फ) सरेको र स्थानीय वायुको पनि प्रभाव रहेको विभागले जनाएको छ । आज बिहान तनहुँको स्याम्घा केन्द्रमा भारी वर्षा मापन भएको र थप पर्षा हुने देखिएकाले मादीलगायत साना नदीमा आकस्मिक बाढीको सम्भावना रहेको बाढी पूर्वानुमान महाशखाले जनाएको छ ।
मौसमविद् कँडेलले अहिले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेत मौसम बदली हुन थालेको जानकारी दिए । यसपटक भने प्रदेश १ देखि प्रदेश ५ सम्म बढी बदली हुने उनले राससलाई बताए । केही स्थानमा भारी वर्षा हुने भएकाले पहिरो र बाढीको जोखिम हुने जानकारी दिँदै उनले सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेका छन् ।